musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Johnny Depp Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemutambi weAmerica ane zita rezita “Mr Stench". Yedu Johnny Depp Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanyori venyeredzi venyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Johnny Depp's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Johnny Depp Upenyu hwepakutanga uye Imhuri Yepashure:
Kutanga kubva, John Christopher Depp II akaberekwa pazuva re9th raJune 1963 kuOnsboro muKentucky, US Iye aive gotwe pavana ve4 akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Betty Sue Palmer nababa vake, John Christopher Depp I.
Nyika yeAmerica yedzinza rakasanganiswa neIrish, Scottish, Welsh, French, Canada, Dutch, Flemish, Belgian neGerman midzi yakarererwa munzvimbo dzakasiyana zvichienderana nebasa rababa vake sainjiniya wehurumende. Panguva iyo Johnny akange ave zera 7, mhuri yake yakagara kuMiramar muFlorida kwaakakurira pamwe chete nevakoma vake vanin'ina Daniel Depp, Christi Dembrowski naDebbie Depp.
Kukura muFlorida, Johnny aifungidzirwa kuve naTourette's syndrome nekuda kwekuti aive akapusa, akazvibvisa uye aigara achiita ruzha rusinganzwisisike. Makore mashoma gare gare, ane makore gumi nemaviri Johnny akatendeuka kuputa fodya nekushandisa zvinodhaka senzira yekutiza padambudziko remhuri yake. Panguva yaive Johhny aripo, akawana nguva yekuridza gitare raakange apihwa naamai vake ndokutanga kutamba mumabhendi akasiyana.
Johnny Depp Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Dzidzo yaJohnny Depp inosanganisira zvidzidzo zvake paHenry D. Perry Middle School muMiramar Florida pamwe neMiramar High Chikoro. Ndichiri kuMiramar High, Johnny aive nechido kwazvo mumimhanzi zvekuti akarega chikoro ave 16-gore-rekutevera zviroto zvake zvekuve muimbi.
Vhiki mbiri mushure mekusiya basa, Johnny akaita u-Turn ndokunodzosera kuchikoro. Nekudaro, mukuru wake akamuraira kuti aparare pfungwa dzechikoro asi afambisire mberi zvido zvake mumimhanzi. Iyeye-achiri wechidiki akateerera zano uye haana kuzombofunga nezvechikoro.
Johnny Depp Yekutanga Yehupenyu Hupenyu:
Taura nezvekutanga kwaJohnny basa apedza chikoro, akatanga nechikwata chemuno chinonzi "Vana" icho chakanakidzwa nebudiriro chakavasimbisa kutanga kuenda pamwechete kuLos Angeles kuti vawane rekodhi dhizaini.
Vachizvimisikidza kuti vabudirire, "Vana" vakachinja zita ravo rebhendi kuenda ku "Six Gun Method" asi munguva pfupi vakaparadzana vasati vawana chibvumirano. Achienderera mberi, Johnny akabatana nechikwata chinonzi "Rock City Angels" uye vakabatana kunyora rwiyo rwavo "Mary".
Johnny Depp Road KuMukurumbira Nyaya:
Muna 1983, Johnny akaroora mumwe wake waimbova shamwari yake, Lori Allison uyo akamubatsira kuziva kuti akange asina remangwana remumhanzi. Naizvozvo, akaunza Johnny kune mutambi Nicolas Cage uyo akamukurudzira kuita basa rekutamba.
Mwedzi yakati gare gare, Johnny akachengetedza chikamu chemufirimu unotyisa A Nightmare paElm Street (1984) uye yakaenderera mberi ichioneka mune komiti Private Resort (1985). Akakandwa zvakare mumutambo waOliver Stone weVietnam Hondo Platoon (1986) uye akazova chidhori chinozivikanwa chevechidiki munguva yekupedzisira 1980s paakazviratidza muPex terevhizheni mfululizo 21 Jump Rue.
Johnny Depp Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Pakurekodha kuwoneka kwakawanda mumutsara 21 Jump Street, Johnny akafunga kuve anosarudzika nemabasa aaiona seakakodzera kune wake wekunaka munhu. Nekudaro, akabvuma kutamba zita remutambi mufirimu yaTim Burton Edward Scissorhands (1990). Iyo firimu haina kungonyora kubudirira kwebhizimusi chete asi yakamisa Johnny semutambi wemuHollywood anotungamira.
Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino, Johnny Depp ndemumwe wevatambi vane mari yepamusoro pasi rese nechitarisiko chake chazvino chiri mufirimu "Anoshamisa Zvikara: Mhosva dzeGrindelwald" (2018). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Johnny Depp Hukama Hupenyu:
Johnny Depp akaroora kaviri panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi pamusoro peakakundikana kuroora, nhoroondo yekufambidzana uye iye zvino hukama hwehukama. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Johnny aisazivikanwa kuti akamboita mukadzi chero iye asati asangana nemukadzi wake wekutanga uye mu-make-up muimbi, Lori Allison. Kunyangwe zvishoma zvichizivikanwa nezve apo ivo duo vakasangana, ivo vakaroora pane 20th yaDecember 1983 uye vakapedza mubatanidzwa 2 makore gare gare mu1985.
Kuenderera mberi kwaJohnny Depp akatanga kufambidzana naSherilyn Fenn uyo waakawedzera kuroorana naye. Nekudaro, ivo vakaenda nenzira dzakasiyana mu1985. Kutora kubatana kwakazvipira kushamwaridzana, Johnny aimbove nerudo naJennifer Grey asati apinda muhukama hwakakomba naWinona Ryder mu1989. Iwo ex-lovebirds akavata nemuchato asi akazoparadzaniswa mu1993.
Johnny akafambidzana nemumwe mutambi Ellen Barkin, Kate Moss (Model) uye anonakidza Vanessa Paradis akazvara vana vake vaviri, Lily-Rose Depp (mwanasikana) naJohn Christopher Depp III (mwanakomana). 2015 raive gore iro mutambi wacho akashamisika nekuroora mutambi Amber Heard waakange achidanana naye kubva 2011. Imba yavo yakagara 15 mwedzi isati yarova matombo.
Nezve chimiro chake chehukama panguva yekunyora, Johnny ari kufambidzana naPolina Glen waakasangana naye mu2018 kumabiko kuLos Angeles. Johnny anogara naPolina panguva yekunyora uye anogona kukurumidza kumufambisa munzira.
Johnny Depp Hupenyu hwemhuri:
Johnny Depp anobva kune yepakati-yemhuri yemhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaJohnny Depp:
John Christopher Depp Ini ndibaba vaJonny. Akashanda sainjiniya wehurumende uye anonzi ane femu yekuvaka. Kunyangwe ivo baba vakura vakaparadzaniswa naamai vaJohnny pavakange vachembera 15, haana kukahadzika padyo nemutambi uyo akatumidzazve mwanakomana wake John Christopher Depp III kumutevera.
Nezve amai vaJohnny Depp:
Betty Sue aive amai vaJohnny. Akashanda semugadziri wemba uye mushandi panguva yaJohnny achiri mudiki. Kutevera kupatsanurwa kwake nababa vaJohnny, Betty akaroorazve mumwe Robert Palmer uyo Johnny anorondedzera semukurudziro. Akagovana hukama hwepedyo nemutambi uye aigara ari muenzi wemutambi kumabasa akasiyana eHollywood kusvika parufu rwake muna Chivabvu 2016.
Nezve hama dzaJohnny Depp:
Johnny ane vakoma vatatu vakuru vanosanganisira Daniel Depp, Debbie Depp naChristi Dembrowski. Daniel ihama yemutambi mukuru uye ane tarenda pane izvo. Iye anonyanya kunyora screenwriter uye akabudirira munyori uyo ane akati wandei mabasa kuchikwereti chake.
Anotevera ndiDebbie ndiye mukuru pane vese vatambi hanzvadzi uye anoshanda semudzidzisi wepuraimari panguva yekunyora. Kune rake divi, Christi Dembrowski mudiki kuna Debbie uye anoshanda semutungamiriri wekambani yakavanzika yaJohnny yekufambisa mifananidzo inonzi Infinitum Nihil.
Nezve hama dzaJohnny Depps:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaJohnny, sekuru nasekuru vake vaive Oren Laramore / Larimore / Larry Depp naViolet Mattie Grinstead apo sekuru vake nasekuru naambuya vaive Walter Everett / Everette Wells naBessie Irene Whitaker zvakateerana. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaJohnny, babamunini, babamunini uye babamunini ivo vazukuru vevatambi vasina kuzivikanwa mune zviitiko zvine mukurumbira zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Johnny Depp Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Johnny Depp abike ... Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Johnny's persona musanganiswa weGemini Zodiac maitiro.
Iye ane hanya, anozvibata ega, anotarisa uye haawanzo kuzivisa ruzivo nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvaari kuita uye zvaari kufarira zvinosanganisira kuridza zviridzwa, kupenda, kuunganidza madhiragi pamwe nekushandisa nguva neshamwari uye nemhuri.
Johnny Depp Mararamiro:
Johnny Depp ane inoshamisa mambure akakosha anodarika madhora mazana maviri emamiriyoni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaJohnny kunonyanya kubva mukuita kwake nepo mashandisiro ake maitiro achiratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kufanana nevakawanda vakapfuma, Johnny anogara mudzimba dzinodhura dzinozivikanwa pakati payo inogara maUS $ 19 emamiriyoni ekugara muLos Angeles. Imba inozvirumbidza yeinosaina gothic, imba yekutandarira inoratidzwa nemakamuri e Deluxe.
Mutambi anozadzikisawo kudiwa kwake kweanomhanyisa nenzira yakasarudzika nekufamba nenzira dzinofamba nemotokari dzinosanganisira dzinosanganisira Cadillac Escalade, 1968 Ford Mustang, 1971 Cadillac Eldorado, 1959 Corvette, Fiat 500, 1951 Ford Mercury, Austin Allegro, Dodge Challenger pakati pevamwe.
Johnny Depp Untold Chokwadi:
Kuputira yedu yeJohnny Depp yehucheche Nyaya uye biography pano pane zvishoma zvinozivikanwa chokwadi izvo zvisina kunyanyoiswa mubhio yake.
Johnny anorova panguva yekunyora uye haapi AfterAfts yekudonsa mapfuti ezvinwiwa zvinwiwa.
Taura nezve chitendero chaJohnny, akazvarwa uye akarerwa somuKristu asi haana hanya nechitendero panguva yekunyora. Uye haana kujekesa kuti mutendi here kana kuti kwete.
Ane akati wandei anozivikanwa mabasa asi haana kuhwina Oscar panguva yekunyora.
Mutambi uyu ane maratidziro anopfuura gumi nemaviri uye anoti “muviri wake chinyorwa munzira. Zvakaita seizvo vafambisi vengarava vaimboita, ipo tattoo yoga yoga yaireva chinhu… ”
Asides anoita, Johnny ane kambani inogadzira mafirimu Infinitum Nihil uye co-ane yake Night Club mu LA inonzi The Viper Kamuri.
Mafirimu ake akabudirira zvikuru mune zvemari panguva yekunyora "Pifungi yeCaribbean" franchise uye "Alice muWonderland," iyo yakadarika $ 3 bhiriyoni uye $ 1 bhiriyoni, zvichiteerana.
Thanks for reading vedu Johnny Depp Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!